Repoblika Demôkratikani Kôngô
Repoblika Entim-bahoakani Sina
Repoblikan i Kôngô
Tolon ny mpianatra malagasy tamin ny 13 Mey 1972
I Hôndorasy dia firenena ao Amerika Afovoany. Ny renivohiny dia Tegucigalpa. Ny tanàna lehibe indrindra dia Tegucigalpa. 112.492 ny velarantaniny ary 8.249.574 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini 2010. Ny faritrora dia −6.
I Iemena dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia Sanaa. 527.829 km 2 ny velarantaniny ary 23.833.000 ny isanny mponiny araka ny fanisana natao taminny taona 2011. Ny faritrora dia +3.
I Indônezia, na Repoblikan i Indônezia, dia firenena eo anelanelan i Azia Atsimo Asinanana sy i Ôseania. Ny firenena Indônezianina dia tamba-nosy manana nosy miisa 17 500, ka ny tamba-nosy lehibe sy mivelatra indrindra eto an-tany. Ny isan ny mpo ...
I Iràka dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia i Baghdad. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 438.317 km2 ny velarantaniny ary 31.129.225 ny isanny mponiny araka ny fanisana natao taminny 2012. Ny faritrora dia +3.
I Iràna na Repoblika Islamikan i Iràna dia firenena ao Azia Andrefana. Ny anarana nohagasina hoe Iràna dia avy amin ny fiteny persana izay midika hoe "Tanin ny Arianina", ary efa nampiasain ny foko persiana hatry ny Andro Taloha, tamin ny fotoan ...
I Islandy dia firenena ao Eoropa. Ny renivohiny dia Reykjavík. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 103.001 ny velarantaniny ary 321.857 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini 12 February 2013. Ny faritrora dia +0.
I Israely na Isiraely dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia i Jerosalema. Ny tanàna lehibe indrindra dia i Jerosalema raha ampidirina ao i Jerosalema Atsinanana. 20 770 km ny velarantaniny ary 8 847 400 ny isan ny mponina ao aminy araka ny fani ...
Ny Jamaika dia firenena any Antiley any andrefani Haiti sy any Atsimoni Koba. Ny renivohiny dia Kingston. Avy aminny fiteny arawak Xamayca midika "tanin-kazo sy ny rano" ny anaranilay firenena ; ny Arawak dia tonga tany Jamaika taminny taonjato f ...
Japana dia firenena ao atsinanani Azia. Ireo firenena manodidina azy dia i Korea Atsimo sy Avaratra, Sina ary Rosia. Ireo nosy lehibe indrindra izay ani Japana dia Honshu, Hokkaido, Kyushu ary Shikoku. Ao aminireo nosy efatra ireo ny 97% ny mponi ...
I Jeorjia dia firenena ao Eoropa Ny renivohiny dia Tbilisi Kutaisi. Ny tanàna lehibe indrindra dia Tbilisi. 69.700 km 2 ny velarantaniny ary 4.555.911 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini 2013. Ny faritrora dia +4.
I Jordania dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia Amman. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 89.342 ny velarantaniny ary 6.508.887 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini July 2012. Ny faritrora dia +3.
I Kambodia, na Fanjakani Kambodia dia firenena any Azia atsimo atsinanana, manana isam-ponina 15 tapitrisa kambojianina. Ny renivohiny dia Phnom Penh. I Kambodia dia ny firenena nandimby ny Empira Kimera hindoista sy bodista nanjaka tao Indosina ...
I Kamerona dia firenena ao aminny faritri Afrika afovoany. I Yaounde no renivohiny. Mpikambana ao amin ny Commonwealth i Kamerona. Mamaritra azy avy ao andrefana i Nizeria, ao avaratra-atsinanana i Tsady, ao atsinanana ny Repoblikan i Afrika Afov ...
Ny Kanada dia firenena any amerika avaratra. Any avaratry ny Etazonia ny misy azy. Tenenina " aminny fiteny anglisy. Hitani Jacques Cartier taminny 1534 ny amorontsiraka atsinanani Kanada, ary ny faritanini Quebec manodidinny renirano Saint-Laure ...
I Katara dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia Doha. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 11.571 ny velarantaniny ary 1.903.447 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini 2013. Ny faritrora dia +3.
I Kazakstana dia firenena ao amin ny faritra avaratr i Azia afovoany. I Kazakstana dia faritanin ny Fanjakana Rosiana ary anisan ny repoblika mpikamban ny Firaisan ny Repoblika Sôsialista Sôvietika taloha, ary nahaleotena tamin ny taona 1991. Kaz ...
I Kioba dia firenena ao Amerika Afovoany. Ny renivohiny dia Havana. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 109.884 ny velarantaniny ary 11.163.934 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini 2012. Ny faritrora dia −5.
I Krôasia dia firenena ao Eorôpa. Ny renivohiny dia i Zagreb. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 56 594 ny velarantaniny ary 4.284.889 ny isa-mponiny. Ny faritrora dia +1.
I Kôlômbia, na Repoblikan i Kôlômbia, dia firenena any avaratra andrefan i Amerika Atsimo. Izy irery no firenena manana morontsirata amin ny Ranomasina Karaiba sy amin ny Ranomasimbe Pasifika. Bogotá no renivohiny, fiteny espaniola ny teny ofisia ...
Ny Kômôro na Firaisan i Kômôro dia firenena ao Afrika Atsinanana, izay fitambaran ny nosy vitsivitsy ao amin ny Lakandranon i Mozambika, any avaratra andrefan i Madagasikara. Atao hoe Kômôriana na Kômôrianina ny mponina ao amin io firenena io iza ...
Ny Côte dIvoire na Kôtidivoara na Repoblikani Côte dIvoire na Repoblikani Kôtidivoara dia firenena any Afrika Andrefana ao aminny Vondrona Afrikanina. Ny velarantaniny dia 322 46 km 2, ny isa-mponiny dia misy 15 366 672 taminny 1998 ary 19 997 00 ...
I Letônia dia firenena ao Eoropa. Ny renivohiny dia Riga. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 64.589 ny velarantaniny ary 2.013.400 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini 2013. Ny faritrora dia +2.
I Libia dia firenena any Afrika Avaratra. Mpikambana ao aminny liga arabo i Libia. Voafaritry ny ranomasina Mediteranea izy any avaratra, i Aljeria sy i Tonizia any andrefana, i Niger sy i Tsady any atsimo ary i Sodàna sy i Ejipta any atsinanana. ...
I Libana dia firenena ao Azia ka i Beirut no renivohiny. Ny tanàna lehibe indrindra dia i Beirut. 10 452 km 2 ny velarantaniny ary 4.822.000 ny isanny mponiny araka ny fanisana natao tamini 2008. Ny faritrorani Libàna dia +2.
I Liechtenstein dia firenena ao Eoropa. Ny renivohiny dia Vaduz. Ny tanàna lehibe indrindra dia Schaan. 160 ny velarantaniny ary 36.281 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini 2011. Ny faritrora dia +1.
I Madagasikara na Repoblikan i Madagasikara dia firenena ao amin ny Ranomasimbe Indianina. Nosy fahefatra lehibe indrindra eto an-tany ny nosy Madagasikara. Toerana fonenan ny 5%-n ny biby sy zavamaniry misy eto amin izao tontolo izao; ka mihoatr ...
Ny Malaoỳ dia firenena any aminny faritra atsimoni Afrika, eo anelanelani Mozambika, i Zambia, ary i Tanzania. Voafaritry ny farihy Malawi na farihy Nyassa izy, farihy fahateloni Afrika aminny velarantaniny, ampadiminny velarantani Malawi ny fari ...
I Maldiva dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia Malé. Ny tanàna lehibe indrindra dia Malé. 298 ny velarantaniny ary 328.536 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini January 2012. Ny faritrora dia +5.
I Malezia dia firenena ao Azia Atsimo-Atsinanana. Izany dia fanjakana federaly ahitana faritany mizaka tena 13. Zarain’ ny Ranomasin’ i Sina Atsimo ny faritra roa lehiben’ i Malezia. Eo amin ny Saikinosin i Malay ny renitaniny. Manoloana ny andil ...
Malta dia firenena an-nosy ; mpikambanani Fikambanana Eoropeanina taminny 1 Mey 2004 ; Nihiditra tao anatinny faritra Euro izy taminny Janoary 2008
I Maorisy na ny Repoblikani Maorisy dia nosy vitsivitsy ao aminny faritra atsimonny Ranomasimbe Indianina, 900 kilometatra 560 maily atsinanani Madagascar sy 3.943 kilometatra 2.450 mi atsimo atsinanani India. Ny nosy St. Brandon sy Rodrigues ary ...
I Marôka, na Fanjakani Marôka dia firenena any avaratra andrefani Afrika, ao aminny vondroni Magreba. Ny renivohiny dia i Rabat. Voafaritry ny ranomasimbe Atlantika i Maroka any andrefana, ny ranomasina Mediteranea any avaratra atsinanana ary voa ...
I Masina Kitts sy Nevis dia firenena ao Amerika Afovoany. Ny renivohiny dia Basseterre. Ny tanàna lehibe indrindra dia capital. 261 km 2 ny velarantaniny ary 51.300 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini July 2005. Ny faritrora dia -4.
Ny Meksika na Mekisiko, afaka tenenina ihany koa hoe firenena mivondroni Meksika, dia firenena any amerika avaratra. Any avaratri Meksika dia misy ny Etazonia ary any antsimo misy ani Beliza sy Guatemala. 107 tapitrisa ny isanny olona miaiana any ...
I Myanmara, na Vondron i Myanmara, dia firenena any Azia Atsimo-Atsinanana mizara sisintany amin i India, ny Bangladesa, i Laôsy, i Sina ary i Tailandy. Voafaritry ny Ranomasina Andamàna sy Helodranon i Bengaly izy any atsimo sy any atsimo-andref ...
I Môngôlia dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia Ulan Bator. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 1.564.115.75 km ny velarantaniny ary 2.892.876 ny isanny mponiny. Ny faritrora dia +7 to +8.
18.966670°S 44.233330°E ﻿ / -18.966670; 44.233330 I Mozambika, na Repoblikani Mozambika, aminny fiteny pôrtogey dia Moçambique ary República de Moçambique, dia firenena ao Afrika eo aminny morontsiraka atsinanani Afrika. Ireo firenena mamaritra a ...
I Namibia na Repoblikani Namibia dia firenena ao aminny faritra atsimoni Afrika. Ny faritra misy ani Namibia ankehitriny dia nitondra ny anarana Afrika Atsimo Andrefana, zanatany alemàna, ary taty aoriana protektoratani Afrika Atsimo. Firenena ma ...
I Nepaly na Repoblika Demokratika Federalini Nepaly, dia firenena himalaianina, voaaty, voafaritri Sina any avaratra, ny India any andrefana, any atsimo sy any atsinanana. Na dia kely aza, betsaka ny endriky ny faritra any Nepaly, avy aminny toet ...
Ny Nicaragua dia firenen Amerika Afovoany. Voafaritry ny Costa Rica izy any atsimo ary ny Honduras any avaratra. Manana amorontsiraka aminny Ranomasimbe Pasifika sy aminny Ranomasinny Karaiba izy. Zanatany Espaniola ny Nicaragua taminny 1524, las ...
I Nizeria na Nijeria, izany hoe Repoblika Federalini Nizeria, dia firenena ao aminny faritra afovoani Afrika ary firenena be mponina indrindra ao Afrika. Ny isa-mponiny taminny taona 2011 dia 162 tapitrisa. Na dia firenena manan-karena aza i Nize ...
I Nosy Solomona dia firenena ao Oseania. Ny renivohiny dia Honiara. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 28.400 ny velarantaniny ary 523.000 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini 2009. Ny faritrora dia +11.
Lany indray tamin’ ny 59.3 %n’ ny vato i Yoweri Museveni tamin’ ny fifidianana natao tamin’ ny volana Febroary 2006. Tamin’ izay dia 37.4 %n’ ny vato no azon’ i Kizza Besigye izay nirotsaka avy ao amin’ ny Forum for Democratic Change FDC. Indimy ...
Ny Okraina dia firenena any Eoropa atsinanana, izy ny firenena ngeza indrindra any Eoropa eo aoriani Rosia. Manana amorontsiraka ny Okraina any atsimony eo aminny Ranomasina Mainty. Mizara sisin-tany aminny Rosia izy any atsinanana, Bielorosia an ...
I Omàna dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia Muscat. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 309.501 ny velarantaniny ary 3.869.873 ny isa-mponiny araka ny fanisana natao tamini 2013. Ny faritrora dia +4.
I Ozbekistana, amin ny fomba ôfisialy ny Repoblikan i Ozbekistèna dia firenena ao Azia Afovoany. Izao no sisin-tany aminny Kazakhstan aminny andrefana sy avaratra, Kirgizistana sy i Tajikistana ny atsinanana, ary Afganistana sy Torkmenistana ho a ...
Pakistàna dia firenena any aminny faritra atsimoni Azia. Izany dia manaraka ny India, Iràna, Afghanistàna, ary Sina. Izany no fomba ofisialy antsoina hoe ny Repoblika Islamikani Pakistàna. Manana morontsiraka lavitra manamorona ny Ranomasina Arab ...
Ny Panamá na Panama dia firenena manana velarantanina 75 640 km² any aminny farany atsimonny Amerika Afovoany, eo aminny ampañalani Panama. Mizara sisintany amini Costa Rica sy Kolombia izy, faritaninny KOlombia Be izy talohanny fahaleovantenany ...
I Paragoay dia firenena ao Amerika Atsimo. Ny renivohiny dia Asunción. Ny tanàna lehibe indrindra dia Asunción. 406 752 ny velarantaniny ary 6.561.748 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamini 2011. Ny faritrora dia –4.
I Però dia firenena ao Amerika Atsimo. I Lima no renivohiny. Ny tanàna lehibe indrindra dia i Lima. 1.285.216 km 2 ny velarantaniny ary 30.475.144 ny isan ny mponiny araka ny fanisana natao tamin ny taona 2013. Ny faritr ora dia −5.
Tolon ny mpianatra malagasy tamin ny ..